I-Black Tie - Imithetho yokuyigqoka ngempumelelo | Amadoda aSitayela
Ungagqoka kanjani ngokwekhodi ye-Black Tie
Izinyanga ezimbalwa ezizayo yisikhathi semicimbi yasebusuku. Uma lokhu kufanelekile, kepha ungakutholi ukubaluleka kwesenzo esisemthethweni, ikhodi yokugqoka ye-Black Tie iyasetshenziswa.
AbaseMelika bakubiza ngokugqoka i-tuxedo, kuyilapho amaNgisi ethanda igama elithi DJ (ibhantshi lesifinyezo lesidlo sakusihlwa). Noma yini oyibiza ngakho, yilezi imithetho ezoqinisekisa impumelelo yakho kule sizini esemthethweni kanye nakunoma isiphi isikhathi lapho i-Black Tie igqokwa njengekhodi yokugqoka.
Ijakhethi, ibhulukwe nothayi womnsalo kumele kube yizinto ezintathu umbala omnyama noma phakathi kwamabili aluhlaza okwesibhakabhaka. Ijakhethi ingaba eyejwayelekile noma ibele kabili futhi kuphela inkinobho yokuqala eboshiwe, okumele ivulwe lapho uhleli phansi - njengoba kunjalo ngawo wonke amajakethi ezempi.
Ihembe kufanele libe mhlophe. Yize ithafa futhi lisiza, inhloso enhle ukufaka imininingwane ehlelekile, enjenge-front pleat noma i-cuff ephindwe kabili ukubonisa ama-cufflink amahle. Uma usebenzisa le nsiza yokugcina, qiniseka ukuthi ubude bemikhono yejakhethi bufushane kunalobo behembe, ukuze babonakale.
Ukusetshenziswa kwayo kungokuzithandela, kepha uma ufuna ukukhombisa isithombe esihle kakhulu Kubalulekile ukugqoka ivesti noma ibhande. Inhloso yawo ukuvimbela ihembe ekubonakaleni phakathi kwenkinobho yebhantshi nebhande lebhulukwe, into ebulala ukudlidliza kweBlack Tie.
Izicathulo kumele zibe izicathulo zokugqoka. Gqoka oxford abukhali, ngaphandle kokuhlobisa nangokukhanya okulingene, ngoba, ubuchwepheshe, isikhumba selungelo lobunikazi silifanele kakhulu i-White Tie. Ungakhetha futhi ama-velvet slippers, ngoba ahleleke ngokwengeziwe kunokungahlelekile. Kunoma ikuphi, amasokisi kufanele abe phakathi kwamabili aluhlaza okwesibhakabhaka noma amnyama.
Ungonakalisi i-tux yakho nganoma iyiphi ingubo. Thola ijazi lendwangu phezu kwamadolo ngethoni emnyama noma yekamela. Ngokwemvelo, ngeke uyigqoke ngaso sonke isikhathi, kepha kuzoqinisekisa ukungena okukhulu, futhi okuvela kuqala cishe konke.
Ngokuqondene nezesekeli, akukho lutho okufanele lufakwe ekhanda, njengezigqoko noma izigqoko. Yebo yebo Kungcono kakhulu ukugqoka iwashi lesandla. Kodwa-ke, abasisebenzisi ngentambo yensimbi noma ngepulasitiki. Kumele kube yisikhumba esimnyama. Futhi ukwakheka kwayo okujwayelekile, kuhlanzeke ngangokunokwenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Ungagqoka kanjani ngokwekhodi ye-Black Tie
Izitayela zezinwele ezinhle kakhulu ezine-bangs zamadoda
Hlangana nabadlali bokuqala abali-18 bakaVictoria's Secret